लूका २० | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
२० एक पटक उहाँ मन्दिरमा मानिसहरूलाई सिकाउँदै र सुसमाचार घोषणा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैबेला धर्म-गुरुहरूका साथमा मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू उहाँकहाँ आए। २ अनि तिनीहरूले उहाँलाई भने: “हामीलाई भन्नुहोस्, तपाईं कुन अख्तियारले यी सब गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईंलाई यस्तो अख्तियार दिने को हो?” ३ उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: “म पनि तिमीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। तिमीहरू मलाई भन: ४ यूहन्नाले बप्तिस्मा गराउने अख्तियार परमेश्वरबाट* पाए कि मानिसहरूबाट?” ५ तब तिनीहरूले आपसमा यस्तो तर्क गरे: “ ‘परमेश्वरबाट’ भनौं भने ‘तिमीहरूले किन ऊमाथि विश्वास गरेनौ त’ भनेर उसले सोध्नेछ। ६ तर ‘मानिसहरूबाट’ भनौं भने सबका सब मानिसहरूले हामीलाई ढुङ्गाले हान्नेछन्‌, किनकि तिनीहरू यूहन्नालाई भविष्यवक्ता मान्छन्‌।” ७ त्यसैले तिनीहरूले थाह छैन भने। ८ अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “म कुन अख्तियारले यी सब गर्छु, म पनि तिमीहरूलाई भन्दिनँ।” ९ तब उहाँले मानिसहरूलाई यो दृष्टान्त बताउन थाल्नुभयो: “एक जना मानिसले दाखबारी लगायो अनि मोहीहरूलाई जिम्मा लगाएर आफूचाहिं निकै लामो समयको लागि विदेशतिर लाग्यो। १० फल टिप्ने बेला भएपछि उसले दाखबारीको कुत उठाउन आफ्नो एक जना दासलाई मोहीहरूकहाँ पठायो। तर मोहीहरूले उसलाई कुटेर रित्तो हात फर्काइदिए। ११ उसले तिनीहरूकहाँ फेरि अर्को दासलाई पठायो। तर त्यसलाई पनि तिनीहरूले कुटे र बेइज्जत गरेर रित्तो हात फर्काइदिए। १२ उसले तेस्रो दासलाई पनि पठायो। त्यसलाई पनि तिनीहरूले घाइते बनाएर बाहिर फालिदिए। १३ त्यसपछि दाखबारीको मालिकले भन्यो: ‘म के गरूँ? म आफ्नो प्यारो छोरालाई पठाउनेछु। तिनीहरूले उसलाई त आदर गर्लान्‌ नि।’ १४ उसलाई देखेपछि मोहीहरूले आपसमा यस्तो सल्लाह गर्न लागे: ‘यो त हकवाला हो, त्यसैले यसलाई मारौं, ताकि यसको सम्पत्ति हाम्रो होस्।’ १५ त्यसपछि तिनीहरूले उसलाई दाखबारीबाहिर लगेर मारे। दाखबारीको मालिकले अब तिनीहरूलाई के गर्नेछ? १६ ऊ आएर ती मोहीहरूलाई मार्नेछ र दाखबारीचाहिं अरूलाई जिम्मा दिनेछ।” यो सुनेर तिनीहरूले भने: “कहिल्यै त्यस्तो नहोस्!” १७ तर उहाँले तिनीहरूलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो: “त्यसोभए यस्तो लेखिनुको अर्थ के हो त: ‘जुन ढुङ्गोलाई डकर्मीहरूले काम नलाग्ने ठाने, त्यही ढुङ्गो नै कुनाको शिरढुङ्गो बनेको छ’? १८ जो यो ढुङ्गोमाथि बजारिन्छ, त्यो चकनाचूर हुनेछ र जसमाथि यो ढुङ्गो खस्छ, त्यो धूलोपीठो हुनेछ।” १९ शास्त्रीहरू र मुख्य पुजारीहरूले उहाँलाई त्यतिबेलै पक्रन खोजे। किनकि उहाँले यो दृष्टान्त तिनीहरूकै विषयमा भन्नुभएको हो भनेर तिनीहरूले बुझे तर तिनीहरू मानिसहरूसित डराए। २० त्यसैले उहाँले बोल्नुभएकै कुरामा उहाँलाई फसाएर सरकारको र राज्यपालको अफिसरको जिम्मा लगाउन तिनीहरूले उहाँको चियो गरे। त्यसपछि केही भाडाका मानिसहरूलाई उहाँकहाँ पठाए र तिनीहरूलाई असल मानिसको ढोंग गर्न लगाए। २१ अनि ती मानिसहरूले उहाँलाई सोधे: “गुरुज्यू, हामीलाई थाह छ, तपाईं ठीक-ठीक बोल्नुहुन्छ र सिकाउनुहुन्छ अनि कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न। तर परमेश्वरको मार्गबारे सत्य कुरा सिकाउनुहुन्छ। २२ हामीले सम्राट्लाई* कर तिर्नु उचित हो कि होइन?” २३ तर तिनीहरूको धुर्त्याइँ थाह पाएर उहाँले यसो भन्नुभयो: २४ “मलाई एक दिनारको* सिक्का देखाओ। यसमा कसको चित्र र नाम छ?” तिनीहरूले जवाफ दिए: “सम्राट्को।” २५ तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “त्यसैले हर हालतमा जे-जे सम्राट्का हुन्‌, सम्राट्लाई र जे-जे परमेश्वरका हुन्‌, परमेश्वरलाई देओ।” २६ उहाँले बोल्नुभएकै कुरामा तिनीहरूले उहाँलाई मानिसहरूसामु फसाउन सकेनन्‌, बरु उहाँको जवाफ सुनेर तिनीहरू छक्क परे अनि केही बोलेनन्‌। २७ केही सदुकीहरू, जो मरेकाहरू पुनर्जीवित हुँदैनन्‌ भन्छन्‌, तिनीहरू उहाँकहाँ आएर सोधे: २८ “गुरुज्यू, मोशाले हाम्रो लागि लेखेका छन्‌: ‘यदि कुनै मानिस निस्सन्तान मऱ्यो तर उसकी पत्नी जिउँदै छे भने उसको भाइले आफ्नो दाइकी पत्नीसित विवाह गरेर दाइको निम्ति सन्तान जन्माउनुपर्छ।’ २९ एउटा परिवारमा सात जना दाजुभाइ थिए अनि जेठोले विवाह गऱ्यो र निस्सन्तान मऱ्यो। ३० त्यसैगरि माइलो ३१ र साइँलोले पनि त्यस स्त्रीसित विवाह गरे। यसरी सातै जनाले त्यस स्त्रीसित विवाह गरे र निस्सन्तान मरे। ३२ अन्तमा त्यो स्त्री पनि मरी। ३३ त्यसोभए, तिनीहरू पुनर्जीवित हुँदा त्यो स्त्री कसकी पत्नी हुनेछे? किनकि त्यो सातै जनाकी पत्नी भइसकेकी थिई।” ३४ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “यस युगका मानिसहरूले विवाह गर्छन्‌। ३५ तर पुनर्जीवित हुन र आउँदै गरेको युगमा जीवन पाउन योग्य ठहरिएकाहरूले विवाह गर्नेछैनन्‌। ३६ वास्तवमा, तिनीहरू फेरि कहिल्यै मर्नेछैनन्‌, किनकि तिनीहरू स्वर्गदूतहरूजस्तै हुनेछन्‌ र पुनर्जीवित भएको हुनाले तिनीहरू परमेश्वरका छोराछोरी बन्नेछन्‌। ३७ तर मरेकाहरू ब्यूँतनेछन्‌ भनेर पोथ्रासम्बन्धी विवरणमा मोशाले पनि बताए। त्यस विवरणमा तिनले यहोवालाई ‘अब्राहामका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकूबका परमेश्वर’ भनेका छन्‌। ३८ उहाँ मरेकाहरूको होइन, तर जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको नजरमा तिनीहरू सबै जीवित छन्‌।” ३९ यो सुनेर केही शास्त्रीहरूले उहाँलाई भने: “गुरुज्यू, तपाईंले ठीक भन्नुभयो।” ४० त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई एउटा पनि प्रश्न सोध्ने आँट गरेनन्‌। ४१ फेरि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “ख्रीष्ट दाऊदको छोरा हुन्‌ भनी तिनीहरूले कसरी भन्न सके? ४२ किनकि दाऊद आफै भजनको पुस्तकमा यसो भन्छन्‌: ‘यहोवाले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, “तिमी मेरो दाहिने हाततिर बस, ४३ जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रो पाउदान तुल्याउँदिनँ।” ’ ४४ यदि दाऊदले उनलाई ‘प्रभु’ भनी सम्बोधन गर्छन्‌ भने ऊ कसरी तिनको छोरा हुन्छ?” ४५ त्यसपछि, सबै मानिसहरूले सुनिरहेको बेला उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो: ४६ “शास्त्रीहरूदेखि होसियार बस, जो लामा-लामा लुगा लगाएर घुमफिर गर्न मन पराउँछन्‌, बजारहरूमा विशेष अभिवादन गरेको चाहन्छन्‌, सभाघरहरूमा सबैभन्दा अगाडि बस्न रुचाउँछन्‌, रात्रि-भोजहरूमा मुख्य-मुख्य आसन खोज्छन्‌, ४७ विधवाहरूको घर हडप्छन्‌ र लामा-लामा देखावटी प्रार्थना गर्छन्‌। यिनीहरूले चर्को दण्ड भोग्नेछन्‌।”
^ लूका २०:४ * शाब्दिक, “स्वर्गबाट।”
^ लूका २०:२२ * ग्रीकमा “सिजर।”
^ लूका २०:२४ * दिनार ३.८५ ग्राम तौल भएको चाँदीको रोमी सिक्का हो।